Michael Keating oo maanta gaaray B/weyne iyo uljeedka uu halkaasi u tagay (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Michael Keating oo maanta gaaray B/weyne iyo uljeedka uu halkaasi u tagay (AKHRISO)
Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keating ayaa maanta gaaray magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Michael Keating waxaa garoonka diyaaradaha magaalada B/weyne kusoo dhaweeyay mas’uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble.
Warar hoose ay warbaahinta Bulshoweyn heleeyso ayaa sheegaya in uljeedka socdaalka Michael Keating ee B/weyne uu salka ku haayo sidii uu uga qeyb gali lahaa kulan uu madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble qorsheeynayo inuu halkaasi kula yeesho maamulka gobolka Hiiraan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada halkaasi ku nool.
Sidoo kale, Michael Keating ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada B/weyne qorsheeynaya wax ka qabashada xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanada ku yaala gobolka Hiiraan, iyadoona ammaanka magaalada B/weyne uu maanta yahay mid si weyn loo adkeeyay.
Dhinaca kale, maamulka Hirshabeele ayaa haatan cadaadis ku saaraya Qaramada Midoobay inay taageero u fidiso gobolka Hiiraan, halkaas oo haatan xaalado aad u liita iyo ammaan-darro ay ka jirto, waxaana haatan muuqata in laga gudbay murankii maamulka Hirshabeele oo ay qaar ka mid ah odayaasha gobolka Hiiraan uga soo horjeedeen maamulkaas.